म सरकारी उपचार खर्च लिन्न : डा. केसी – Health Post Nepal
म सरकारी उपचार खर्च लिन्न : डा. केसी
२०७७ कार्तिक २९ गते १३:२७
डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारले बेहोर्छु भनेको उपचार खर्च नलिने जनाएका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले भनेका छन्, ‘सरकारले मेरो उपचार खर्च बेहोर्छु भनेको सन्दर्भमा मेरो उपचार खर्च म आफैं बेहोर्छु बरु सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा गरोस्।’
उनले आफू कोरोना संक्रमित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको स्वास्थलाभको शुभकामना सन्देशप्रति खुशी व्यक्त गरेका छन्।
‘कोरोना संक्रमित विपन्न र दूरदराजका नागरिक जसलाई निःशुल्क उपचार आवश्यक छ उनीहरूले अहिलेसम्म उपचार पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि सरकारको ध्यान व्यक्ति विशेषको उपचार खर्च बेहोर्नुभन्दा सबै विपन्न नागरिकको उपचार खर्च बेहोर्नेमा हुनुपर्दछ’, उनले विज्ञप्तिमार्फल बनेका छन्।
आफूसँग पटक-पटक गरिएका सम्झौता कार्यन्वयन भएको भए देशका दूरदराजदेखि सबै भेगमा ठूला सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज बन्ने र जनताले अहिलेको अवस्था भोग्नु नपर्ने उनले बताएका छन्। यसो गरे सबै जनताले कोरोना साथै सम्पूर्ण रोगको गुणस्तरीय, निःशुल्क र सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ सेवा पाउने बताए।
‘तसर्थ हामीसँग १९औं सत्याग्रहमा भएका सम्झौता यथाशीघ्र कार्यन्वयन गर्न म सरकारसँग आग्रह गर्दछु। मेरो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएकोमा फेरि पनि तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु’, उनले भनेका छन्।